DHAGEYSO: Maxaa Ka Cusub C/Kariin Qalbi-Dhagax+Halkeebaa loo wadaa, Sirdoon Noocee ah ayaa la daba dhigay??? | Afrikada
DHAGEYSO: Maxaa Ka Cusub C/Kariin Qalbi-Dhagax+Halkeebaa loo wadaa, Sirdoon Noocee ah ayaa la daba dhigay???
Jun 29, 2018 - Dhiibo Aragtidaada
Afrikada, Muqdisho: Warar hor leh ayaa ka soo baxaya arrinta Cabdikariim Qalbi Dhagax. Ninkani oo ahaa halgamaa ka tirsanaan jirey ciidankii xoogga dalka ayaa isagu 10 bil ka hor dowladda federaalku ku wareejisay dowladda Itoobiya.
Wareysi uu idaacadda VOA siiyay afhayeenka Ururka ONLF Cabdiqaadir Xasan Hirmooge ayaa uu ku sheegay in C/kariin uusan heysanin xuriyad dhameystiran, isaga oo sheegay in sirdoonka Itoobiya ay kor ka waardiyeysan doonaan Qalbi dhagax. Hiirmooge ayaa sheegay in ay weli jiraan arrimo u baahan in xal laga gaaro.
Hiirmooge ayaa yiri “C/kariin wuxuu ahaa siyaasi u xirnaa dowladda Itoobiya, in odayaal uu magan u ahaado ma ahan, in sii deyn iyo heyn uu u dhaxeeyo arrimahaasi waa wax ka baxsan nidaamka maxaabiista, labaatan maallmood kahor ayaa laga sii daayay xabsiga oo lagu hayay xaafad, C/kariin waa inuu helaa xoriyadiisa siyaasiga ah.”